Raheem Sterling iyo Jordan Henderson oo helay biladda MBE… (Ka bogo waxa ay la micno tahay biladdan iyo waxa ay ku muteysteen) - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
June 12, 2021 at 09:28 Raheem Sterling iyo Jordan Henderson oo helay biladda MBE… (Ka bogo waxa ay la micno tahay biladdan iyo waxa ay ku muteysteen)2021-06-12T09:28:40+02:00 CAYAARAHA
(England) 12 Juun 2021. Weeraryahanka kooxda Manchester City ee Raheem Sterling ayaa la guddoonsiiyay biladda MBE (The Most Excellent Order of the British Empire) taasoo ka mid ah biladaha lagu bixiyo maamuuska dhalashada Boqoradda Ingiriiska.
Biladdan oo la siiyo muwaadiniinta boqortooyda Britain u dhashay ee sida weyn kaga qayb qaatay arrimaha culuumta iyo farshaxanka ayaa Sterling waxa uu ku muteystay ole’olaha uu galay in ciyaaraha ay u sinnaadaan isirrada kala duwan ee dadka oo laga fogeeyo midab-sooca.
Laacibkan 26-jirka ah ayaa tan iyo 2017 waxa uu gudaha iyo bannaanka garoonka waday in la cirib tiro isir-sooca ku dhex milan isboortiga.
Dhinaca kale, Kabtanka Liverpool ee Jordan Henderson ayaa ayaa isaguna helay aqoonsiga MBE oo uu ku muteystay dadaalladii uu u galay inay xiddigaha ka ciyaara Premier League ay garab istaagaan dadka uu cuuryaamiyay xanuunka Korona Fayras sanadkii lasoo dhaafay.
Hendo ayaa isugu yeeray dhammaan kabtannada kooxaha ka ciyaara horyaalka heerka koowaad ee Ingiriiska isagoo bilaabay mashruuc lacag-uruurin ah oo ay ku garab istaageen hay’adda National Health Services oo dhaqaale iyo cunnooyin ku caawineysay dadka u go’doomay Koofid dartiis.
Sidoo kale, xiddigan ayaa haatan safiir u noqday hay’adda sadaqada bixisa ee NHS, waxaana biladda MBE ee la siiyay uu u hibeeyay shaqaalaha NHS.
« Maxkamadda Brazilian Supreme Court oo ugu dambeyn go’aan cad ka qaadatay inuu tartanka Copa America ka dhaco dalka Brazil
Soomaaliya Iyo Azerbeijan oo Xoojinaya Iskaashigooda »